थोक mm० मिमी लेग प्रोफाइल भारी शुल्क मोडेल फोल्डि T टेन्ट गाजेबो विभिन्न आकारहरू उपलब्ध पाल र ग्रीनहाउस | Winsom
Mm० मिमी लेग प्रोफाइल भारी शुल्क मोडेल फोल्डि T टेन्ट गाजेबो विभिन्न आकारहरू उपलब्ध छन्
-4०--49 टुक्रा -०-9999 टुक्रा
> १०० टुक्रा
.00 .00२.०० .00 40.00 । .00$.००
२) उच्च गुणस्तरको अक्सफोर्ड कपडा पीवीसी कोटिंग र १००% वाटरप्रूफ र यूभी सुरक्षात्मक साथ
)) स्थापना पुस्तिकाको २ जना मानिसद्वारा सेट अप गर्न सजिलो
मोडेल नम्बर WS-F333
वस्तुको नाम Mm० मिमी लेग प्रोफाइल भारी शुल्क मोडेल फोल्डि T टेन्ट गाजेबो विभिन्न आकारहरू उपलब्ध छन्
कभर सामग्री 600D अक्सफोर्ड
फ्रेम कल्पना। लेग प्रोफाइल --- x०x40० / x०x30० मिमी मोटाई १.mm मिमी, ट्रस बार --- १xx30० मिमी
तौल २k किलोग्राम
रमाइलो नगरी सूर्यबाट बाहिर निस्कनुहोस्! पोर्टेबल १० x १० पप अप क्यानपाइ तम्बू पर्खाल प्यानल संग एक हल्का मनोरन्जन शरणस्थान हो जुन एक मिनेट भन्दा कममा भेला हुन्छ। UV- प्रतिरोधी क्यानपी शीर्षले घामको हानिकारक किरणहरूबाट% 99% UV सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यो उच्चतम आउटडोर कपडा यूवी सुरक्षा उपलब्ध छ! दुई-पक्षीय सेतो चाउको र colorले आश्वासन दिन्छ कि तपाईं पालमा बस्दा तपाईं शान्त रहनुहुन्छ। सिधा खुट्टा डिजाइन अतिरिक्त स्थिरता प्रदान गर्दछ। बरसातको मौसममा, क्यानोपी तम्बू तपाईंलाई न्यानो राख्नबाट बचाउन वाटरप्रूफ हुन्छ।
आउटडोर प्रकार्यहरूको विस्तृत श्रृंखलाका लागि आदर्श, जस्तै शो, पार्टीहरू, BBQs, चाडपर्वहरू, व्यावसायिक प्रयोग र यस्तै।
पालले प्रीमियर टिकाऊपन प्रदान गर्दछ र प्रदर्शन आउँछ जहाँ तपाइँलाई यो चाहिन्छ। यी कडा, पूर्ण रूपमा भेला भएका फ्रेमहरूको सबैभन्दा ठूलो लेग ट्युबिंग हामी प्रस्ताव गर्छौं र भारी शुल्क प्लास्टिक र प्रबलित इभहरू प्रस्तुत गर्दछौं। सेटअप गर्न सरल र चाँडै सजीलो ट्रान्सपोर्ट गरिएको कम्प्याक्ट आकारमा फित्छ जुन टट क्यारी ब्याग भित्र प्रदान गर्दछ।
भारी शुल्क र शीर्ष ग्रेड mm० मिलिमिटर लेग प्रोफाइल, जसले तपाईंको पाल र थप सुरक्षालाई सुदृढ पार्न सक्छ।
हावा समर्थन पोल स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ।
छत कभरि 600 D०० डी अक्सफोर्ड कपडाबाट पीवीसी कोटिंग र १००% वाटरप्रूफ र यूभी सुरक्षात्मक हुन्छ।
अघिल्लो: टनेल ग्रीनहाउस बिक्रीको लागि १०′x7′x7 For
अर्को: प्रीमियम फोल्डिंग क्यानपी टेंट १०x१ft फिट (× × m.m मीटर)